Izizathu zokuthi kungani unondindwa angaba nobisi ngaphandle kokukhulelwa | Izinja Umhlaba
Izizathu zokuthi kungani unondindwa angaba nobisi ngaphandle kokukhulelwa
Kwake kwenzeka kuwe ukuthi inja yakho inezimpawu ezifana nokukhishwa kobisi, kepha uqiniseke kakhulu ukuthi ayikhulelwe?
Lokhu kunegama futhi "ukukhulelwa okungelona iqiniso”, Noma ukukhulelwa ngokwengqondo, futhi akuyona enye into ngaphandle kokungalingani kwamahomoni okwenzeka ekukhiqizeni i-progesterone, okuthi futhi ngenxa yalokho, kuvame ukubeka umzimba emzimbeni wezinkukhu zokukhulelwa.
1 Inja yami inebisi kodwa ayikhulelwa, ngani?
1.1 Ziyini izimpawu zokukhulelwa kwengqondo kuma-bitches?
1.2 Ingabe kukhona ukwelashwa kwengqondo ngalezi zimo?
2 Ukukhulelwa ngokwengqondo kungaba namiphi imiphumela kuma-bitches?
3 Kungenzeka yini ukuvimbela ukukhulelwa kwengqondo?
4 Kuthatha isikhathi esingakanani ukukhulelwa kwengqondo?
5 Yini okufanele uyenze lapho ubhekene nokukhulelwa kwengqondo?
6 Ungakwazi ukusika i-bitch ngokukhulelwa kwengqondo?
7 Inja yami inoketshezi oluphuzi oluphuma emabeleni ayo, kujwayelekile yini?
8 Inja yami ithola uketshezi onsundu emabeleni ayo
9 Ingabe inja engathathi hlangothi ingakhulelwa ngokwengqondo?
10 Ngabe kukhona ukwelashwa kwe-homeopathic okungasetshenziswa?
Inja yami inebisi kodwa ayikhulelwa, ngani?
Ukukhulelwa ngokwengqondo yisona sizathu esenza siqale ukubona ukukhiqizwa kobisi kuma-bitchesnjengoba kwandisa ukukhiqizwa kweprolactin. Ngale ndlela, sizokwazi futhi ukubona isimilo somama ezinsikazini, cishe lonke iphakethe lezimpawu zokukhulelwa kodwa ngaphandle komkhiqizo obaluleke kakhulu, inzalo.
Ukukhulelwa okungamanga ngesinye sezizathu esenza inja yethu iqale ukukhipha ubisi ngaphandle kokukhulelwa. Kuyaziwa nangokuthi ukukhulelwa.
Ziyini izimpawu zokukhulelwa kwengqondo kuma-bitches?
Izimpawu ezivame kakhulu yilezi ezilandelayo:
Imvamisa ilungisa izikhala zokufika okusobala kwentsha.
Ufihla cishe noma yini inja engayibona isongela.
Izinzwa ezingaguquki, lokhu kuyisizathu sokuthi kungani kuthanda ukucasha kalula.
Amabele ajwayele ukukhula, yize engekho ezimweni zonke.
I-anorexia noma ukulahlekelwa ukudla.
Kwezinye izimo bathola isisindo.
Izinguquko ekuziphatheni kwakho.
Ukukhishwa kwesitho sangasese sowesifazane
Ukububula nokukhala njalo.
Ukweqisa okomama okweqile, bathambekele ekutholeni into sengathi yingane yabo futhi bayivikele ngendlela yehaba.
Ubhekene nalezi zinhlobo zezimpawu Kunconywa kakhulu ukuyisa inja yethu kudokotela wezilwane ngokushesha okukhulu, ngendlela yokuthi kungenzeka kwenziwe izivivinyo ezifanele ukuthola ukuthi ngabe kukhona ngempela yini ukukhulelwa kukho.
Ingabe kukhona ukwelashwa kwengqondo ngalezi zimo?
Ngempela, kungenzeka ukuhamba nenja yethu ngalesi sikhathi esinzima ngemisebenzi embalwa elula. Iningi lalokhu kuhloswe ngalo ukunciphisa amazinga oxinzelelo inja yethu engaletha, kanye ne- ukukhathazeka nokuziphatha okubi.
Ukubambisana nalokhu, kubalulekile ukumnika uthando oluningi nenkampaniNjengoba nezinja zingasebenzisa inkampani eningi nemfudumalo yabantu, ngakho-ke kubalulekile ukubanikeza konke ukwesekwa abakudingayo phakathi nalesi simo.
Kumele kuqashelwe ukuthi ukwelashwa kwengqondo akuqukethe uchungechunge lwezinyathelo, futhi akuyona iqoqo lemikhombandlela okufanele ilandelwe. Kuyadingeka nje ukuqinisekisa ukuthi inja yethu ihlala ikhululekile ngangokunokwenzeka.
Ukukhulelwa ngokwengqondo kungaba namiphi imiphumela kuma-bitches?
Okuvame kakhulu kuvame:
Ukukhathazeka, ingcindezi, isimilo esingasebenzi kahle kaningi ngaphandle kwesizathu.
Imfiva, izinkinga ngokunyakaza nokwenza imisebenzi yansuku zonke.
Ukukhiqiza ubisi ngokweqile kungadala imastitis.
Kungenzeka yini ukuvimbela ukukhulelwa kwengqondo?
Kukhona indlela esebenza kahle kakhulu, empeleni engalethi noma yiluphi uhlangothi lwephutha futhi kumayelana nokuthena. Ngakho-ke, ama-hormone abo okuzala ngeke akwazi ukuveza ukungalingani okungadala lolu hlobo lokuphendula ku-bitch uqobo. Ngale ndlela, kungenzeka ukuthi sikuqede ngokuphelele ukukhulelwa, futhi sizisindise ngokwelashwa zonke izimpawu ezivezwe ngaphambilini ukusindisa impilo yenja yethu.
Kuthatha isikhathi esingakanani ukukhulelwa kwengqondo?
Akunakwenzeka ukukhombisa ngqo ukuthi ukukhulelwa kwengqondo kuhlala isikhathi esingakanani ku-bitch, ngoba esimweni ngasinye lokhu kungahluka. Noma kunjalo, kulinganiselwa ukuthi ingahlala phakathi kweviki elingu-1 nele-3, isikhathi lapho izimpawu zalokhu ziqala ukuncipha.
Kepha uma kudlula amasonto angaphezu kwe-4 nalezi zimpawu, i-bitch ingahle ibe nokuhluleka okukhulu kokulawula kwe-hormonal, okumele ilashwe udokotela wezilwane ngomuthi ofanele. Kufanele futhi ukhumbule ukuthi kungenzeka ukuthi lesi simo sihlala sikhona enja yakho nokuthi ekushiseni ngakunye esinaso kwethulwa kuye.
Yini okufanele uyenze lapho ubhekene nokukhulelwa kwengqondo?
Uma inja yakho inezimpawu zokukhulelwa ngokwengqondo, kufanele ulandele amathiphu alandelayo ukwenza isimo sithwale wena naye:
Menze azame ukukhohlwa kancane ngalokho abhekene nakho, akhulise ukuhamba kwakhe nokuzivocavoca nsuku zonke. Ngalokhu uzoqinisekisa ukuthi akakhathazeki ngokukhulelwa kwengqondo.
Ngalesi sikhathi inja yakho izoba melancholic kakhulu futhi ibucayi, ngakho-ke kuzodingeka ukuthi umnikeze uthando olwedlulele. Mnike umthamo omuhle wokutotosa!
Uma uqaphela ukuthi uzama ukudala isidleke “sokufika” kwamaphuphu akhe, zama ukukugwema ngazo zonke izindlela, ngoba lokhu kuzokuqinisa kuphela isimilo somama njengamanje.
Susa izinto ezingaphili njengezilwane ezigxotshiwe namathoyizi lapho angafinyelela khona, lokho kungadala inja yakho ifuna ukuyakhela isidleke.
Gwema ngangokunokwenzeka ukuthi inja yakho ikhothe amabele ayo, ngoba lokhu kuzikhuthaza kuzokwenza kusebenze uketshezi lobisi. Uma kunesidingo, sebenzisa ukhololo ka-Elizabethan kulokhu.
Futhi gwema ukungenisa amanzi ngokweqile, ngoba ngale ndlela ukukhiqizwa kobisi ku-bitch nakho kuyakhuthazeka.
Gwema ukunikeza amakhambi asekhaya, ngoba eziningi zalezi azivunyelwe odokotela bezilwane futhi zingagcina zithinte impilo yenja yakho.
Kunjalo, yiyise kudokotela wezilwane othembekile ukuze kube nguye oqinisekisa isimo sempilo yenja futhi akhombise ukwelashwa okufanele ukuthi akuthole.
Ungakwazi ukusika i-bitch ngokukhulelwa kwengqondo?
Into engcono kakhulu ongayenza uma kwenzeka ukhulelwe ngokwengqondo noma ukukhulelwa komzimba ukulinda, ngoba uma inja ikulesi simo ngesikhathi sokuhlinzwa, okokuqala ngeke ixazulule inkinga ngokusheshaOkwesibili, ngokusebenza eduze kwezicubu zesifuba se-bitch, esivuthayo, kungenzeka izinkinga zokuphulukisa ezizodala ukungakhululeki kakhulu ku-bitch esikhunjeni sayo, phakathi kwezinye izifo.
Ngokubheka lokhu okungenhla, odokotela bezilwane bakubona kuwubuhlakani ukulinda inja enalesi sifo iyeke ukukhiqiza ubisi ukuze ihlinzwe.
Inja yami inoketshezi oluphuzi oluphuma emabeleni ayo, kujwayelekile yini?
Lapho ukukhulelwa kwengqondo kwenzeka kuma-bitches, uketshezi oluphuzi ngezikhathi ezithile lungaphuma emabeleni ngokuthungwa okulindelekile. Lokhu kungenxa yokuthi sisebusweni be-mastitis, ukutheleleka kohlobo lwegciwane futhi lokho kunganikezwa ibele lakho elilodwa noma amaningi.
Lolu hlobo lwesifo idinga ukubonwa ngudokotela wezilwane, ngoba ku-bitch kungadala umkhuhlane, ukudangala nokuntuleka kwesifiso. Futhi, amabele akho angajika abe luhlaza okwesibhakabhaka futhi abangele ubuhlungu obukhulu.
Udokotela wezilwane ophatha i-bitch uzokhipha ama-antibiotic nezinqubo ezithile ukuze uthulule okuqukethwe emabeleni akhe.
Inja yami ithola uketshezi onsundu emabeleni ayo
Uma amabele akho e-bitch efihla uketshezi onsundu futhi engalethwanga okusha, kungaba ngenxa yesimila kwelinye lamabele abo noma kwezinye zazo, okuvame ukwenziwa kwabesifazane abangakavalwa inzalo futhi okuvame ukubonakala ngemuva kweminyaka eyisithupha ubudala.
Ukwethula ama-bitches umdlavuza webele, Unesisindo esingenabuhlungu njengesimpawu esiyinhloko, okungadala isilonda sesikhumba nokopha. Yisifo esintekenteke futhi kufanele selashwe ngokushesha, ngoba kungenzeka ukuthi siphinde sibuye futhi sithuthukise amaphaphu enja.
Ingabe inja engathathi hlangothi ingakhulelwa ngokwengqondo?
Ngemuva kokuthenwa, kungenzeka ukuthi bazothola ukukhulelwa kwengqondo, lapho esinye sezizathu okungenzeka kube ukuthi ukuhlinzwa okwenziwe akuzange kwenziwe ngokuphelele, okungukuthi, ukususwa kwesisu esisodwa noma womabili.
Esinye isizathu esingadala ukukhulelwa kwe-pseudopregnings kuma-bitched castches ukuthi kube khona izicubu ezisalayo endaweni ehlukile yesifunda se-ovarian, okuthi, njengokujwayelekile, zitholakale ngaphakathi kwe-ligament ye-ovari noma enyunyaneni ekhona nodonga lwesisu .
Umehluko wama-bitched neutched, ukuthi lawa ngeke iveze ukukhishwa kwe-vulvarYize bekwazi ukwethula i-smear yesitho sangasese sowesifazane ngenxa yobukhona bama-estrogens, kepha ngokujwayelekile kunokubukeka okufana nokwama-bitches angakaze athathwe.
Ngokufanayo, ama-bitches athenjiwe anokukhula esithweni sangasese, esidonsela abesilisa ngenxa yephunga labo futhi singahle sibonakale singcwele kulabo abanezinsalela zama-ovari noma kulawo ma-bitches okususwe amaqanda abo, kepha hhayi isibeletho.
Ukuze wenze ukuxilongwa okufanele ku-bitch engathathi hlangothi, udokotela wezilwane kuzodingeka enze i-cytology noma ukuhlolwa kwegazi lokho kunquma ubukhona be-progesterone noma i-estrogens kuyo. Ukuhlolwa okushiwo kumele kuphindwe, ngoba ezikhathini eziningana kungahle kunganqunywa, ngoba azizivezi ngendlela ehlaba umxhwele.
Ngemuva kokuzimisela kukadokotela wezilwane, uzokutshela ukuthi ngabe i-bitch izodinga ukuhlinzwa okusha ukuze kususwe izinsalela zama-ovari noma ukwelashwa okungcono kakhulu okufanele kwenziwe.
Ngabe kukhona ukwelashwa kwe-homeopathic okungasetshenziswa?
Lapho kukhona ukukhulelwa kwengqondo enjeni yakho, kungenzeka ukuthi kuzosetshenziswa ezinye izindlela zokwelapha i-homeopathic, ezivumela ukunciphisa imiphumela yalokhu esilwaneni sakho. Bazokuhlaziya bese bekubuza imibuzo eminingana ukuthola ukuthi isilwane sikusiphi isimo. Ngalo lonke lolu lwazi, bazokunikeza ukwelashwa okufanelekile kuye.
Kunoma ikuphi, uma icala lomngani wakho onemilenze emine libucayi, kufanele athathe umuthi othile onikezwe ngudokotela wezilwane wakhe. Khumbula ukuthi lokhu kungaba inqubo ebuhlungu kakhulu enja futhi okufanele ukufune ukwazi ukumsiza ukuba abe muhle ngangokunokwenzeka.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Curiosities » Izizathu zokuthi kungani unondindwa angaba nobisi ngaphandle kokukhulelwa
Ngabe inja ekhanyisiwe ingaba nokushisa?